လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင် လိုက်နာသင့်တဲ့ ကျင့်ဝတ်လေးတွေ…… - Myanmar Media
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင် လိုက်နာသင့်တဲ့ ကျင့်ဝတ်လေးတွေ……
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုက်နာသင့်သော လူ့ကျင့်ဝတ်များ
ဖုန်းမဖြေရင် ၂ခါထက်ပိုမခေါ်ပါနဲ့။မိမိဖုန်းဖြေဖို့ထက်အရေးတကြီးလုပ်နေတယ်လို့မှတ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးစာပို့ထားလိုက်။
ပိုက်ဆံချေးထားရင် နည်းများမဆိုပြန်ပေးပါ။ ပစ္စည်းငှားထားရင်လဲ အပ်တိုတစ်ချောင်းကအစ၊ ဘောပင်၊ စာအုပ်၊ ထီး အဆုံးအကုန်ပြန်ပေးပါ။
အကယ်၍ကိုယ်ဖျောက်လိုက်မိရင် မူလပစ္စည်းထက်တန်ဖိုးမနည်းတဲ့ဟာဝယ်ပေးပြီး ဆောရီးပြောပါ။ကြားမဖြတ်ပါနဲ့။ ဘာလုပ်လုပ်( အိမ်သာတက်, ကားမောင်းအစ)တန်းစီပါ။
သူများမုန့်ဝယ်ကျွေးတာစားရင် ဈေးအကြီးဆုံးဟင်းလျာ/ စားစရာမမှာပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွေးမွေးဒကာခံသူကိုပဲသူ့စိတ်ကြိုက်မှာပါစေ။
သူများဖြေဖို့အခက်တွေ့စေမဲ့မေးခွန်းတွေမမေးပါနဲ့။ “မယူကြသေးဘူးလား?” “လစာဘယ်လောက်ရလဲ? ” အစရှိသဖြင့်ပေါ့။
ကိုယ့်နောက်ဝင်မဲ့သူရှိရင်တံခါးကိုဆွဲဖွင့်ပေးထားပါ။(သူတို့ဝင်လာနေရင်ပေါ့) အဲလိုပဲကိုယ်ဝင်လာတာမြင်လို့တံခါးဖွင့်ထားပေးနေသူကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ။
သူငယ်ချင်းနဲ့တက္ကစီအတူပေါင်းစီးလို့ကျငွေသူရှင်းရင်နောက်တခါမဖြစ်မနေကိုယ်ရှင်းပါ။သူတပါးရဲ့နိင်ငံရေးအမြင်သဘောထားကိုလေးစားပါ။ (နိုင်ငံရေးမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်နဲ့သဘောထားချင်းမတူတာကိုလက်ခံပါ)
အရေးတကြီးမှမဟုတ်ရင်ညကြီးမိုးချုပ်ဖုန်းမဆက်ပါနဲ့။သူများစကားပြောနေချိန်ကြားဖြတ်မပြောပါနဲ့။ကိုယ်စ နောက်လိုက်တာသူတပါးမကြိုက်ရင် ချက်ခြင်းရပ်ဆိုင်းပါ။ နောက်နောင်လဲအဲဒီလိုဘယ်တော့မှ မစနောက်ပါနဲ့။
ကိုယ်ပြောနေတာကိုစိတ်ဝင်စားဟန်မပြရင်လေကုန်ခံပြီးဆက်မပြောပါနဲ့တော့။ သူစိတ်မဝင်စားတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုရင် ခပ်တိုတိုအဖြေပေးတာ၊ အကြည့်တွေတခြားဆီရောက်နေတာ၊ ကိုယ်နဲ့တဖြေးဖြေးဝေးသွားတာမျိုးတွေပေါ့။
ဝိတ်အတတ်အကျနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမဝေဖန်မိပါစေနဲ့။ “ယူသိပ်မိုက်တယ်နော်” လို့သာပြောပါ၊ ဝိတ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးသူတို့စပြောချင်ပြောပါလိမ့်မယ်။
ခရီးရှည်မသွားခင်ရေချိုးသန့်စင်ပါ၊ ကိုယ့်ဘေးမှာထိုင်မိသူကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။ (အရမ်းပြင်းတဲ့ရေမွှေးဆွတ်တာမျိုးတော့ရှောင်ပါ) ကိုယ့်နှာခေါင်းနဲ့သူ့နှာခေါင်းမတူနိုင်ဘူးလေ။
တယောက်ယောက်ကသူရဲ့ဖုန်းကနေ ဓာတ်ပုံပြရင် ပြတဲ့ပုံကလွဲပြီး အရှေ့အနောက်လှန်မကြည့်ပါနဲ့။ ဘာပုံတွေရှိနေမလဲဆိုတာမပြောနိူင်ဘူးလေနော်။
ကိုယ့်အသိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က ဆရာဝန်သွားပြမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်တာလဲ ဘာရောဂါလဲမမေးပါနဲ့။ “အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေ” လို့သာပြောပါ။ သူ့အခြေအနေသူပြောချင်မှပြောပါစေ။ သူမပြောချင်ရင် ကိုယ်လဲအတင်းမေးမြန်းရာမကျဘူးပေါ့။
ကိုယ့်လက်အောက်ကသူတွေနဲ့ဆက်ဆံပါက ကိုယ့်အထက်ကလူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံနဲ့မခြားဆက်ဆံပါ။ ကိုယ့်အောက်ကလူတွေကိုရိုင်းစိုင်းစွာဆက်ဆံတာအထင်ကြီးစရာမရှိဘူး။လူတန်းစားမခွဲခြားပဲတလေးတစားဆက်ဆံရင်သူများလဲကိုယ့်ကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်။
အစီအစဉ်ဆွဲစရာ ဆွေးနွေးစရာတွေရှိရင် အဲဒီအစီအစဉ်မှာမပါသူရဲ့ရှေ့မှာမဆွေးနွေးမတိုင်ပင်ပါနဲ့။နားကြပ်တပ်ထားသူကိုစကားသွားမပြောပါနဲ့။ (သူများတောင်နားအေးပါးအေးနေချင်တာကို) သေရေးရှင်ရေးဆိုရင်တော့နားကြပ်ကြီးဆွဲဖြုတ်ပြီးသာအော်ပြောပါ
ကိုယ့်ကိုစားစရာတခုခုလာကျွေးလို့ကိုယ်မစားချင်ရင် အစကတည်းက “No, thank you” လို့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးငြင်းပါ။ စားကြည့်ပြီးမှ (မချိုမချဉ်မျက်နှာနဲ့) ငြင်းရင်ကျွေးတဲ့သူလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့။
တယောက်ယောက်ကသူတို့ကျန်းမာရေး(ရောဂါ) အခြေအနေလာပြောရင် နားသာထောင်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်(ရောဂါ)အကြောင်းအတင်းပြန်မပြောပါနဲ့။
ကိုယ်အသိတယောက်ယောက်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားရင် (အရမ်းဝ/ပိန်ကျသွားတာ, ခေါင်းပြောင်လာတာ, ဆိုးဆိုးရွားရွားဝက်ခြံပေါက်တာ အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ) သွားမဝေဖန်ပါနဲ့။
သူများကား/ဆိုင်ကယ်ငှားစီးရင် ဆီအပြည့်ဖြည့်ပြီးမှပြန်ပေးပါ။ကိုယ့်ကိုပြုစေလိုတဲ့အတိုင်းသူတပါးကိုပြုပါဆိုတဲ့ ဆုံးမစကားအတိုင်းအမြဲသွားပါ။ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးသောလမ်းပါပဲ။
လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်သည်တွေအနားမှာရှိနေရင်လုံးဝမသောက်ပါနဲ့။ကိုယ့်အခန်းကလွဲဘယ်သူ့အခန်းပဲဖြစ်ဖြစ်မဝင်ခင်တံခါးခေါက်ပါ။ (နောင်တရစရာတွေရှောင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)
အများသုံးယာဉ်စီးနေရင်စကားအကျယ်ကြီး/ဖုန်းအကျယ်ကြီးပြောတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ (တချို့နိုင်ငံတွေမှာBus Car ၊ရထားစီးနေချိန်ဖုန်းမပြောရဥပဒေရှိပါတယ်)
သူတပါးအသက်မွေးပညာကိုအလကားလုပ်ခိုင်းခြင်းရှောင်ကျဉ်ပါ။ (သူများအချိန်၊ငွေ၊ချွှေး တွေနဲ့ရင်းထားတာကိုလေးစားပါ) orginal writer
လူ့ပတျဝနျးကငျြတှငျ လိုကျနာသငျ့သော လူ့ကငျြ့ဝတျမြား
ဖုနျးမဖွရေငျ ၂ခါထကျပိုမချေါပါနဲ့။မိမိဖုနျးဖွဖေို့ထကျအရေးတကွီးလုပျနတေယျလို့မှတျ။ ကိုယျပွောခငျြတဲ့အကွောငျးလေးစာပို့ထားလိုကျ။
ပိုကျဆံခြေးထားရငျ နညျးမြားမဆိုပွနျပေးပါ။ ပစ်စညျးငှားထားရငျလဲ အပျတိုတဈခြောငျးကအစ၊ ဘောပငျ၊ စာအုပျ၊ ထီး အဆုံးအကုနျပွနျပေးပါ။
အကယျ၍ကိုယျဖြောကျလိုကျမိရငျ မူလပစ်စညျးထကျတနျဖိုးမနညျးတဲ့ဟာဝယျပေးပွီး ဆောရီးပွောပါ။ကွားမဖွတျပါနဲ့။ ဘာလုပျလုပျ( အိမျသာတကျ, ကားမောငျးအစ)တနျးစီပါ။
သူမြားမုနျ့ဝယျကြှေးတာစားရငျ စြေးအကွီးဆုံးဟငျးလြာ/ စားစရာမမှာပါနဲ့။ ဖွဈနိုငျရငျ ကြှေးမှေးဒကာခံသူကိုပဲသူ့စိတျကွိုကျမှာပါစေ။
သူမြားဖွဖေို့အခကျတှစေ့မေဲ့မေးခှနျးတှမေမေးပါနဲ့။ “မယူကွသေးဘူးလား?” “လစာဘယျလောကျရလဲ? ” အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။
ကိုယျ့နောကျဝငျမဲ့သူရှိရငျတံခါးကိုဆှဲဖှငျ့ပေးထားပါ။(သူတို့ဝငျလာနရေငျပေါ့) အဲလိုပဲကိုယျဝငျလာတာမွငျလို့တံခါးဖှငျ့ထားပေးနသေူကို ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောပါ။
သူငယျခငျြးနဲ့တက်ကစီအတူပေါငျးစီးလို့ကငြှသေူရှငျးရငျနောကျတခါမဖွဈမနကေိုယျရှငျးပါ။သူတပါးရဲ့နိငျငံရေးအမွငျသဘောထားကိုလေးစားပါ။ (နိုငျငံရေးမှမဟုတျပါဘူး၊ ကိုယျနဲ့သဘောထားခငျြးမတူတာကိုလကျခံပါ)
အရေးတကွီးမှမဟုတျရငျညကွီးမိုးခြုပျဖုနျးမဆကျပါနဲ့။သူမြားစကားပွောနခြေိနျကွားဖွတျမပွောပါနဲ့။ကိုယျစ နောကျလိုကျတာသူတပါးမကွိုကျရငျ ခကျြခွငျးရပျဆိုငျးပါ။ နောကျနောငျလဲအဲဒီလိုဘယျတော့မှ မစနောကျပါနဲ့။
ကိုယျပွောနတောကိုစိတျဝငျစားဟနျမပွရငျလကေုနျခံပွီးဆကျမပွောပါနဲ့တော့။ သူစိတျမဝငျစားတာကိုဘယျလိုသိနိုငျလဲဆိုရငျ ခပျတိုတိုအဖွပေေးတာ၊ အကွညျ့တှတေခွားဆီရောကျနတော၊ ကိုယျနဲ့တဖွေးဖွေးဝေးသှားတာမြိုးတှပေေါ့။
ဝိတျအတတျအကနြဲ့ပတျသကျပွီးဘယျတော့မှမဝဖေနျမိပါစနေဲ့။ “ယူသိပျမိုကျတယျနျော” လို့သာပွောပါ၊ ဝိတျနဲ့ပါတျသတျပွီးသူတို့စပွောခငျြပွောပါလိမျ့မယျ။
ခရီးရှညျမသှားခငျရခြေိုးသနျ့စငျပါ၊ ကိုယျ့ဘေးမှာထိုငျမိသူကြေးဇူးတငျပါလိမျ့မယျ။ (အရမျးပွငျးတဲ့ရမှေေးဆှတျတာမြိုးတော့ရှောငျပါ) ကိုယျ့နှာခေါငျးနဲ့သူ့နှာခေါငျးမတူနိုငျဘူးလေ။
တယောကျယောကျကသူရဲ့ဖုနျးကနေ ဓာတျပုံပွရငျ ပွတဲ့ပုံကလှဲပွီး အရှအေ့နောကျလှနျမကွညျ့ပါနဲ့။ ဘာပုံတှရှေိနမေလဲဆိုတာမပွောနိူငျဘူးလနေျော။
ကိုယျ့အသိလုပျဖျောကိုငျဖကျက ဆရာဝနျသှားပွမယျဆိုရငျ ဘာဖွဈတာလဲ ဘာရောဂါလဲမမေးပါနဲ့။ “အစစအရာရာအဆငျပွပေါစေ” လို့သာပွောပါ။ သူ့အခွအေနသေူပွောခငျြမှပွောပါစေ။ သူမပွောခငျြရငျ ကိုယျလဲအတငျးမေးမွနျးရာမကဘြူးပေါ့။
ကိုယျ့လကျအောကျကသူတှနေဲ့ဆကျဆံပါက ကိုယျ့အထကျကလူတှကေိုဆကျဆံတဲ့ပုံစံနဲ့မခွားဆကျဆံပါ။ ကိုယျ့အောကျကလူတှကေိုရိုငျးစိုငျးစှာဆကျဆံတာအထငျကွီးစရာမရှိဘူး။လူတနျးစားမခှဲခွားပဲတလေးတစားဆကျဆံရငျသူမြားလဲကိုယျ့ကိုသတိထားမိလိမျ့မယျ။
အစီအစဉျဆှဲစရာ ဆှေးနှေးစရာတှရှေိရငျ အဲဒီအစီအစဉျမှာမပါသူရဲ့ရှမှေ့ာမဆှေးနှေးမတိုငျပငျပါနဲ့။နားကွပျတပျထားသူကိုစကားသှားမပွောပါနဲ့။ (သူမြားတောငျနားအေးပါးအေးနခေငျြတာကို) သရေေးရှငျရေးဆိုရငျတော့နားကွပျကွီးဆှဲဖွုတျပွီးသာအျောပွောပါ
ကိုယျ့ကိုစားစရာတခုခုလာကြှေးလို့ကိုယျမစားခငျြရငျ အစကတညျးက “No, thank you” လို့ယဉျယဉျကြေးကြေးငွငျးပါ။ စားကွညျ့ပွီးမှ (မခြိုမခဉျြမကျြနှာနဲ့) ငွငျးရငျကြှေးတဲ့သူလဲစိတျမကောငျးဖွဈတာပေါ့။
တယောကျယောကျကသူတို့ကနျြးမာရေး(ရောဂါ) အခွအေနလောပွောရငျ နားသာထောငျလိုကျပါ။ ကိုယျ့(ရောဂါ)အကွောငျးအတငျးပွနျမပွောပါနဲ့။
ကိုယျအသိတယောကျယောကျကရုပျပိုငျးဆိုငျရာသိသိသာသာပွောငျးလဲသှားရငျ (အရမျးဝ/ပိနျကသြှားတာ, ခေါငျးပွောငျလာတာ, ဆိုးဆိုးရှားရှားဝကျခွံပေါကျတာ အစရှိသဖွငျ့ပေါ့လေ) သှားမဝဖေနျပါနဲ့။
သူမြားကား/ဆိုငျကယျငှားစီးရငျ ဆီအပွညျ့ဖွညျ့ပွီးမှပွနျပေးပါ။ကိုယျ့ကိုပွုစလေိုတဲ့အတိုငျးသူတပါးကိုပွုပါဆိုတဲ့ ဆုံးမစကားအတိုငျးအမွဲသှားပါ။ အရိုးရှငျးဆုံးနဲ့အထိရောကျဆုံးသောလမျးပါပဲ။
လူထူထပျတဲ့နရောတှမှောဆေးလိပျမသောကျပါနဲ့။ အထူးသဖွငျ့ ကလေးငယျတှနေဲ့ကိုယျဝနျသညျတှအေနားမှာရှိနရေငျလုံးဝမသောကျပါနဲ့။ကိုယျ့အခနျးကလှဲဘယျသူ့အခနျးပဲဖွဈဖွဈမဝငျခငျတံခါးခေါကျပါ။ (နောငျတရစရာတှရှေောငျပွီးသားဖွဈပါလိမျ့မယျ)
အမြားသုံးယာဉျစီးနရေငျစကားအကယျြကွီး/ဖုနျးအကယျြကွီးပွောတာတှမေလုပျပါနဲ့။ (တခြို့နိုငျငံတှမှောBus Car ၊ရထားစီးနခြေိနျဖုနျးမပွောရဥပဒရှေိပါတယျ)
သူတပါးအသကျမှေးပညာကိုအလကားလုပျခိုငျးခွငျးရှောငျကဉျြပါ။ (သူမြားအခြိနျ၊ငှေ၊ခြှေး တှနေဲ့ရငျးထားတာကိုလေးစားပါ) orginal writer